Guddoomiye Cabdi Wali oo ku baaqay in wax laga qabto dhibaatooyinka haysta shirkadaha isgaariisiinta iyo xawilaadaha – Kalfadhi
Guddoomiye Cabdi Wali oo ku baaqay in wax laga qabto dhibaatooyinka haysta shirkadaha isgaariisiinta iyo xawilaadaha
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Shacabka dowlada Federaalka ee Soomaaliya Cabdi wali Ibraahim Muudeey, ayaa ku baaqay in wax laga qabto dhibaatooyinka haysta shirkadaha isgaariisiinta iyo xawilaadaha dalka Soomaaliya.
Gudddoomiye kuxigeenka 1-aad ee golaha Shacabka, ayaa hadalkaasi ka sheegay shalay munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiiyay madaxda Xawaaladda Soomaaliyeed ee Taaj oo ka dhacday magaalada Muqdishu.
“Hadii la dhihi jiray shirkadaha waxay la shaqeeyaan argagixisada, waa been sababtoo ah maantana waxay keeneen abaalmarintaan oo marqaati ka ah inay si sharci ah u shaqeeyaan”, ayuu yiri.
Xawaaladaha ayaa sanado ka hor waxaa lagu eedeyn jiray in lacagaha ay u diraan dalka Soomaaliya ay ku dhacdo gacmaha kooxaha argagixisada ah ah.
Xawaaladaha Soomaalidda ayaa fududeeya lacagaha qurba-joogta ay usoo diraan dalka Soomaaliya taas oo ka qeyb-qaadaneysa dib-u-dhiska dalka Soomaaliya.
Xildhibaan Jeesow oo Beeniyay in Itoobiya ay dhex dhexaadinayso Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland
Xildhibaan Dowladda Soomaaliya ugu Digay in Midowga Afrika kala hadasho kiiska Badda ee Kenya
Guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka Hirshabelle oo maanta u furmay tababar ku sabaasan doorka baarlamanka ee la xisaabtanka hay’adaha amniga